भ्रष्टाचारी भाग्दै छन्, तर भागेपनि छोडदिन – प्रधानमन्त्री ओली (भिडियोसहित) • ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
भ्रष्टाचारी भाग्दै छन्, तर भागेपनि छोडदिन – प्रधानमन्त्री ओली (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : 16 February, 2019 2:34 pm
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को झण्डै दुईतिहाई प्राप्त सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षलाई सरकारले समृद्धिको आधार वर्षका रुपमा चित्रण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसका बारेमा धेरै लामो सम्बोधन गर्नुभएको छ र सम्बोधन हामी सवैको हातमा छ । नेपाली जनताले त्यो सम्बोधन सुनिसक्नु भएको छ, विभिन्न टेलिभिजनबाट, पत्रपत्रिकाबाट । जसका बारेमा टिकाटिप्णीहरु पनि सुरु हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट वा रोष्टममा उभिएर, पत्रकार सम्मेलनमा एउटा लेखिएको कुरा बताउने भन्दा यसरी गरिएको छलफलका माध्यमबाट अझ नेपाली साच्चैको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले, यो स्थिर सरकारले । बहुमतको सरकारले र झण्डै दुईतिहाइको सरकारले एक वर्षमा के के काम गर्यो ? किन यसलाई आधार वर्ष भन्यो ? आगामी बाटो के तय गरेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको मुखबाट छलफलको माध्यमबाट सुन्न अझ बढी रुचाउनु हुन्छ होला भन्ने उद्देश्यले आज हामी यो अन्तवार्ता गर्दै छौं ।(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शुक्रवार एवीसी न्यूजका लागि अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शुभशंकर कंडेलले लिनुभएको अन्तर्वार्ता जस्ताको तस्तै)
मैले अघि भनेजस्तै यहाँले यो एक वर्षलाई वर्तमान सरकारको एक वर्ष सङ्घीयता, सुशासनर र समृद्धिको आधार वर्ष भन्नु भयो । के कारणले तपाईंले समृद्धिको आधार वर्ष भनेर पोइन्ट गर्नु भयो ?
केही पनि थिएन । २० वर्षदेखि स्थानीय निकायहरु रिक्त थिए । त्यस अवस्थामा संरचनागत पक्षको तयारी गर्नु आवश्यक थियो । कर्मचारीहरुको संमायोजन गर्नु जरुरी थियो । यो अभ्यास, विल्कुलै नयाँ अभ्यास । यो सङ्घीय शासन प्रणाली नेपालको इतिहासमा पहिलो, पृथक । यो असजिलो प्रणाली हो । अर्कोतिर कुनै अभ्यास नभएको । कुनै दृष्टान्त नभएको । कुनै उदाहरण नभएको । कुनै नजिर नभएको । त्यस्तो व्यवस्था हो । जो आफैले नयाँ अभ्यासद्धारा नजिरहरु अनुभवका आधारमा स्थापित गर्दै जानुपर्छ । अर्कोतिर लोकतन्त्र, मैले भन्ने गर्छु यो वेस्टमिस्टरीयल (पश्चिमा) प्रणाली हो । तर यो संसदीय व्यवस्था ठ्याक्कै त्यस्तो होइन । किन यसमा यो जे कम्पोनेन्ट छ, त्यो पृथक छ ।
भ्रष्ट तत्वहरु कारवाहीको डरले राजनीनामा दिएर भाग्ने स्थितिमा छन । कतिपय । कतिपय राजनीनामा दिएर भाग्दैछन् । कतिपय अरु भाग्छन् । भाग्दैनन् भने कारवाहीमा पर्छन् । म के भन्छु भने सरकार चुप लागेर बसेको छैन् । अनुगमनमाथि अनुगमन भइराखेको छ
यसरी मेरो नेतृत्वको सरकारले, एउटा मान्छेहरुलाई के भ्रम हुनुहँदैन भने कतिपय साथीहरुमा अलिकति असन्तुष्टि पनि छ, स्वाभाविक पनि हो । त्यो असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा होला । तर, हामी एउटा नयाँ ढंगले, नयाँ तरंग आएको त यसै बुझ्न सकिन्छ । बाहिर जानेको संख्या घटेको छ, कामदारहरुको । रेमिटयान्स बढेको छ । नियमित गरिएको छ । नियमन गरिएको छ । बाहिर जाने आवश्यकता घटेको छ । ठुलो संख्यामा ३९ प्रतिशत संख्या घट्नु भनेको सानो कुरा होइन् । ३१ प्रतिशत आम्दानी बढ्नु, त्यसबाट रेमिट्यान्स बढ्नु यो पनि ….। ३९ प्रतिशत घटेपछि त ३९ प्रतिशत घट्नु पर्ने थियो । ३१ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । अर्थार्त नियमन भएको छ र बाहिर जाने आवश्यकता न्यून भएको छ ।
मैले चाडक्यको नीति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र भित्रको कुरा यहाँलाई स्मरण गराएको त्यस कारणले पनि हो । आर्थिक वर्षमा योसंगसंगै यहाँले अघि भनेजस्तै ३३ ओटा मौलिक हक अधिकार मध्ये १७ ओटा भन्दा बढी कानुनहरु बने । संरचनाहरु निर्माणभए । अन्तर प्रदेश र सङ्घीय स्तरमा परिषद्को बैठक भयो र त्यसले एउटा संयन्त्र निर्माण ग¥र्यो र अनेक काम भए । सबै भन्दा ठुलो तपाईंले यो समृद्धिको वर्ष भनिराखेको बेलामा आर्थिक रुपमा एउटा विचित्रको विरासत लिएर आउनु भएको थियो । यहाँले सम्बोधनका बेलामा पनि पटक पटक भन्नु भयो, कि मान्छेलाई लुटपाट, कहिलेकाहँी मैले यहाँलाई अनौपचारिक रुपमा भन्दा शासन चलाउने, यी सरकार चलाउने भनेजस्तै गर्दा यो जहिले सुकै सरकार चलाइयो । मान्छेलाई लाग्न सक्छ शासन गर्ने र सरकार चलाउने भनेको एउटै जस्तो हो । तर आज चाहि आर्थिक क्षेत्रमा एकथरीहरुले एकदमै उत्पातै पार्दियो, बिगारी दियो, सिध्याइदियो । जुन यहाँले भनेको भाग्दै गरेकाहरुको स्वर होला भन्ने म ठान्छु र आर्थिक रुपमा चाहि हामीले जनतालाई बुझ्ने यो समृद्धिको आधार वर्ष बनाउनको लागि ठ्याक्कै यो यो गर्यौं भनेर के के भन्न सक्नुहुन्छ ?
मेरो मन नपरेको कुरा पनि मिडियाले भनिहाल्छ । मिडियाको मन नपरेको कुरा पनि मैले भनिहाल्छु । यति खुलस्त, यति आत्मिय छ नि । मिडिया पनि मसँग डराउदैन । विश्वास छ म माथि, यो मिडिया फ्रेन्डली छ । यसले दुश्मनी गर्दैन भनेपछि डराउदैन । म पनि मिडियसँग डराउदिन । किनभने मिडिया मेरो आत्मिय छ । त्यसकारण त्यो सम्बन्धलाई पनि कसै कसैले बुझ्दैन् । कहिले कहिले मैले अलिकति टिप्पणी गरे भने लौँ मिडियाको सम्बन्धमा बोल्यो । अब यसलाई मिडियाले थिचथाच, किच काच बनाएर अचार वनाउछन् होला जस्तो ठान्छन् कतिले । अरुलाई भए मिडियाले थिचथाच गर्ला, मलाई गर्दैन । यो जे गरेको छ, यसले अनेस्टली गर्याछ भन्ने थाहा छ सबैलाई ।
हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद!